Iván Aivazovski iyo jaceylka uu u qabo badda | Abuurista khadka tooska ah
Xeebaha saliida ee Iván Aivazovski
Waxaa jira farshaxanno ama rinjiyeyaal gaar ah oo kahelaya xirfaddooda ama noloshooda farshaxanimo cunsur caadi ah iyo taas waxay qirayaan doorbid aad u qaas ah. Van Gogh iyo ubaxiisa qorraxdu waa mid ka mid ah tusaalooyinka aan sida ugu dhakhsaha badan ugu soo jeesan karno si aan uga helno ugu yaraan rinjiyeyaasha qaarkood haddaanay u badnayn kuwa badan.
Toddobaadkii hore waan xusuustay ranjiile reer Hangari ah oo aad u macquulsan kaas oo lahaa tirada haweenka sida mawduuca soo noqnoqda ee inta badan shaqadiisa. Wax ku dhaca Iván Aivazovski kiisa u hibeynta badaha iyo meelahaas muuqaalka ah halka xariijinta cirifka ay u jirsadeen bad ama bad aan dhammaad lahayn.
Aivazovski waa farshaxan yahan u dhashay Armenia-Russian kaas oo dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad xoogaa rinjiyeeyay shaqooyinka tayada sare leh ee badaha taas oo siinaysa dareenka ah inaad quusin karto mowjaddaas oo ku dhici doonta mid ka mid ah dhinacyada maraakiibtaas ay la kulmeen duufaannada duufaanka wata.
Shaqo isku dhafan awooda bada iyo cirka taas farshaxan simbosis kaamil ah, halka buluugga uu yahay midabka ugu weyn ee tagaya mugdiga iyo codadka fudud, ama lagu madhalay jaalle bixiya midabada ugu cagaaran waqtiyada qaarkood ee maalinta oo ay caddeynta biyuhu siinayaan kuleylka iyo nasashada badda deggan biyaheeda.
Rinjileeye ku kasbaday aqoonsi guud awoodiisa inuu wax laqaban karo tayo sare leh awoodda dabeecadda iyo badaha markay marayaan meesha ugu sarreysa, taas oo ah marka duufaanku u rogrogo durdurradan mowjado khatar badan oo mitir dheer.
Rinjire wanaagsan oo aan khadadkaas kula wadaagno dhawr ka mid ah shuqulladiisa oo muujinaya xiisahaas badda, xasilloonidiisa iyo kulaylkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Xeebaha saliida ee Iván Aivazovski
Ifafaalaha zombie: Falanqeyn ku saabsan isbeddellada bilicsanaanta ee 3 daqiiqo
Algorithm ee lagu eedeynayo jilitaanka barafka wanaagsan ee lagu arkay Disney's Frozen